Ny Fanangonan-Tsonian’ireo Olom-pirenen’ny Fiombonam-be Eoropeana Ho Fanoherana Ny Fifanarahana Nataon’Ny CETA Sy Ny TTIP · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2015 9:22 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, čeština , Ελληνικά, Español, Română , македонски, Deutsch, srpski, Italiano, English
Atahoran'ireo mpitsikera ho natao hanampiana ireo fandraharahana lehibe hiala amin'ireo fandrindràna tena manana ny lanjany ilay fifanarahana. Efa nisy tranga toy izany koa tao ambadik'ity sariitatra politika tamin'ny taona 1904 ity izay maneho kamiao lehibe mpitatitra solika amin'ny endrika orita iray nihodidina ny demokrasia. Navoakan'ny Ottmann Lith, Co., 1904 Sept. 7. Creative Commons amin'izao fotoana izao.
Nanangon-tsonia manohitra io fifanarahana ataon'ny CETA (the Comprehensive Economic and Trade Agreement) sy ny TTIP (The Transatlantic Trade and Investment Partnership) io ny olom-pirenena rehetra manerana an'i Eoropa. Araky ny nambaran'ny Kaomisiona Eoropeana, ny CETA dia “hanome sehatra lehibebe kokoa ao Kanada sy hanome asa maro ao Eoropa”, raha toa kosa ny TTIP “ikendrena hanàlana ny sakana amin'ireo sehatra maro ara-toekarenamba hahamora ny fividianana sy fivarotana ireo vokatra sy tolotra eo amin'ny Eoropa sy Amerika.”
Raha ny voalazan'ireo bilaogera, ireo mpampiasa tambajotra sosialy ary ny mpamoaka vaovao The Independent anefa, ny tanjon'ireo fifanarahana roa ireo dia ny “hanafoanana ireo ny fitsipika mitsojo sy ny fifaninanana ara-tsosialy” mba hampiroboroboana ireo fandraharahana lehibe ary
ny manaisotra ny orinasa manontolo tsy ho eo ambanin'ny fiarovana ara-pitsipika.
Azonao atao ny mahazo vaovao sy hevitra bebe kokoa amin'ny alalan'ny #TPPTuesday, #TTIP sy ny tenifototra #CETA ao amin'ny Twitter sy Facebook :
Efa nandre ny hoe #TPP ve ianao? Raha tsia, manontania hoe NAHOANA?
Na dia efa nolavin'ny Kaomisiona Eoropeana (EU) aza ilay tolo-kevitra avy aminà vovonana iray ahitàna ireo mpanao fampielezankevitry ny Fiombionambe Eoropeana mba hanaovana hetsiky ny olom-pirenena Eoropeana na ny European Citizens’ Initiative (ECI) hanoherana ny TTIP sy ny CETA ny volana Septambra lasa teo, dia mbola maro ny fikambanana tsy miankina avy amin'ny lafivalon'i Eoropa nanohy ny fandresen-dahatra nataony hanoherana ilay fifanarahana. Hatreto aloha, efa 333 ny isan'ireo Fikambanana, fanentanana sosialy momba ny rariny sy ny hetsika momba ny zon'olombelona no nanohana ilay hetsiky ny olom-pirenena Eoropeana hanoherana ny TTIP sy ny CETA.
Mivaky toy izao ny votoatin'ilay fampahafantaranana :
Te hanakana ny TTIP sy ny CETA izahay satria misy resaka manahirana betsaka ao ambadika io raharaha io, toy ny fifandirana eo amin'ireo firenena mpampiasa vola sy ireo didy momba ilay fifanarahana izay mety hanohina ny demokrasia sy ny fifehezan'ny lalàna. Tianay sorohana ny fitontongan'ny asa, ny sosialy, ny tontolo iainana, ny fiainana manokana sy fenitra ho an'ny mpanjifa, ary tsy ho lasa baranahiny ao anatinà fifanarahana tsy mangarahara ireo tolotra ho an'ny mpanjifa (toy ny rano) ary ny ara-kolotoraly. Ny ECI dia manohana politikam-pifanakalozana ara-barotra sy fampiasam-bola ao anatin'ny Fiombonam-be Eropeana.
Indrindra indrindra fa hoe manahy ireo mpitsipaka ilay fifanarahana ara-barotra ny amin'ny hisian'ny hoe ny TTIP mety hanome zo vaovao ho an'ireo mpamatsy vola avy any ivelany hitory ny governemanta eo anoloan'ny fitsaràna mpanelanelana noho ny fahaverazan'ny tombontsoany, izay mety hitranga noho ny fanapahan-kevitra politikan'ny fanjakana noraisina noho ny tombontsoam-bahoaka (Ny blaogy War on Want no ahitana vaovao misimisy kokoa momba io).
Kanefa dia manohy mitanisa ny tombontsoa azo avy amin'ireo fifanarahana roa ireo ihany ny Fiombonam-be Eropeana. Nandritra ny fitsidihana natao vao haingana tao amin'ny Oniversite “Dauphine” ao Parisy hampahafantarana ilay fifanarahana, Cecilia Malmström, ilay Kaomisera ara-barotry ny Fiombonam-be Eoropeana dia nilaza tamin'ireo mpianatra fa ny “TTIP no isan'ireo fifanarahana lehibe indrindra” izay “mahakasika ny rehetra” ary “manome fahafahana amin'ny famoronana asa, fitomboan'ny fampiasam-bola ary koa ara-ekonomika izay ho tombotsoan'ny olom-pirenena ao Eoropa iray manontolo.”
Ny fifandirana misy ankehitriny amin'ny CETA sy ny TTIP dia mampibaribary ny ‘tsy fanjarian'ilay atao hoe demokrasia” an'ny ao Eoropa : haino aman-jery tsy miankina, mafana fo ary olom-pirenena maro no tsy mitsaha-mitombo ho toy ny vondrona iray ahitàna ireo olona velon'ahiahy mba hitsipaka ireo fifanarahana miisa roa izay hitan'izy ireo fa manitsakitsaka ny tombontsoam-bahoaka, kanefa ny Fiombonam-be Eropeana — izay rantsana tsy voafidim-bahoaka akory — dia manohy tsy miraharaha fa mitady marimaritra iraisana sy mampahafantatra azy ireny.
CETA: Fotoana izao hanekena fa fifanarahana lafovidy sy feno fihatsaram-belatsihy io
Global Voices dia hanohy hanara-maso ny vaovao mifandraika amin'io raharaha CETA sy TTIP io ny taona 2015.